Tumira Email Kupfuura SMTP MuWordPress Ine Microsoft 365, Live, Outlook, kana Hotmail | Martech Zone
Kana uri kutamba WordPress seyako zvemukati manejimendi sisitimu, iyo sisitimu inowanzo gadzirirwa kupusha email mameseji (senge mameseji mameseji, zviyeuchidzo zvepaswedi, nezvimwewo) kuburikidza neako Anogamuchira. Nekudaro, iyi haisi mhinduro inorairwa nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka:
Mamwe mauto anodzivirira kugona kutumira maemail anobuda kubva kuseva kuitira kuti vasave chinangwa chevabati kuti vawedzere malware anotumira maemail.
Iyo email inouya kubva kuseva yako kazhinji haina kusimbiswa uye kusimbiswa kuburikidza neemail kutendekesa nzira dzechokwadi senge SPF or DKIM. Izvi zvinoreva kuti maemail anogona kungoendeswa akananga kune junk folda.
Iwe hauna rekodhi yemaimeri ese anobuda anosundirwa kubva kuseva yako. Nekutumira ivo kuburikidza neyako Microsoft 365, Live, mataridzikiro, kana Hotmail account, Uchave ese mune yako yakatumirwa dhairekitori - kuti iwe ugone kuongorora izvo mameseji ari kutumirwa newebsite yako.
Mhinduro yacho, chokwadika, ndeye yekuisa SMTP plugin iyo inotumira yako email kunze kweako Microsoft account pane kungo sundidzirwa kubva kuseva yako. Pamusoro pezvo, ini ndinokurudzira kuti iwe ugadzire iyo patsanura Microsoft mushandisi account chete nekuda kwekutaurirana uku. Nenzira iyi, haufanire kunetseka nezve resets password izvo zvinodzivisa kugona kutumira.
Unoda kumisikidza Gmail Panzvimbo? Dzvanya Pano
Nyore WP SMTP WordPress Plugin
Mune yedu runyorwa rweiyo zvakanakisisa WordPress plugins, tinonyora iyo Nyore WP SMTP plugin semhinduro yekubatanidza yako WordPress saiti kune SMTP server kuratidza uye kutumira maemail anobuda. Zviri nyore kushandisa uye kunyangwe inosanganisira yavo bvunzo tebhu yekutumira email!
Zvirongwa zve Microsoft zviri nyore.
Inoda SSL: Hongu
Inoda TLS: Hongu
Inoda Kusimbiswa: Hongu
Chiteshi cheSSSL: 587
Heano maitiro anotarisa mumwe wevatengi vangu, Royal Spa (ini handisi kuratidza iwo minda yezita rezita uye password):
Tumira Yeyedza Email WIth Iyo Yakareruka WP SMTP Plugin
Namatira iro rakagadzirwa password Nyowani WP SMTP uye ichave ichisimbisa nemazvo. Edza email, uye uchaona kuti yatumirwa:
Iye zvino unogona kupinda muakaundi yako yeMicrosoft, enda kune Yakatumirwa folda, uye uone kuti yako meseji yatumirwa!
Tags: DMARCnyore wp smtpemail kuburitswahotmailLivemicrosoft 365mataridzikirophp tsambatumira emailSMTPsmtp pluginspfWordPressemail emailWordpress plugin